Israel nanao dingana mba hampihenana ny fielezan'ny Coronavirus COVID-19
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Israel nanao dingana mba hampihenana ny fielezan'ny Coronavirus COVID-19
Israel dia tsy mahazo fotoana miaraka amin'ny fipoahana sy fiparitahan'ny coronavirus COVID-19. maro nofoanana ny sidina ary ny vahiny avy amin'ny firenena voatondro sasany dia voarara tsy hiditra any Isiraely.
Ny Cathay Pacific dia nampiato ny sidina eo anelanelan'ny Tel Aviv sy Hong Kong eo anelanelan'ny 24 feb ary hatramin'ny 31 martsa. Ny sidina Hong Kong dia efa nampihena ny faharetan'ny sidina eo anelanelan'ny Tel Aviv sy Hong Kong taorian'ny fipoahan'ny virus.
Ny fampiatoana ny sidina rehetra dia nantenaina taorian'ny fandraràn'ny minisiteran'ny fahasalamana israelianina ny Sinoa rehetra, Hong Kong, Singapore ary teratany Thailandy tsy hiditra ao amin'ny firenena. Ny Israeliana mody mody avy any amin'ireo firenena ireo dia takiana hanan-kery mandritra ny roa herinandro.
El Al dia efa nampiato ny sidina misy azy eo anelanelan'ny Tel Aviv sy Hong Kong hatramin'ny 31 martsa. Rehefa niato ny sidina mankany Beijing sy Hong Kong, dia nampiato ny sidina mankany Bangkok ihany koa ny mpitatitra israeliana.
Fiaramanidina Koreana Air izay niantsona tany Israel dia nanana teratany koreanina 200 ary israelianina roa ambin'ny folo. Ny fiaramanidina dia nijanona teny lavitra tamin'ny tranobe terminal, ary ny mpandeha israeliana dia nalefa tany amin'ny quarantine an-trano nandritra ny efatra ambin'ny folo andro. Ireo mpandeha Koreana dia tsy nahazo niditra tao amin'ny firenena ary rehefa nodiovina sy naverina namboarina ny fiaramanidina dia voatery nanao ny dia roa ambin'ny folo ora niverina tany Seoul niaraka tamin'ny ekipa mpisolo toerana voatondro.
Korean Air dia miasa sidina efatra isan-kerinandro eo anelanelan'i Seoul sy Tel Aviv. Ireo sidina ireo dia azo inoana fa hampiatoana, toy ny sidina rehetra manelanelana an'i Israel sy China ary Hong Kong.
Amin'ity dingana ity dia tsy misy baiko ankapobeny momba an'i Korea atsimo, fa ny mpizahatany Koreana izao any Israel dia tsy maintsy hiditra amina quarantine efatra ambin'ny folo andro avy hatrany, toy izany koa ny Israeliana hiverina avy any Korea Atsimo. Nihitatra ny kaomandy handrakofana ireo mpizahatany israeliana niverina avy any Japon, Macau, Singapore, ary Taiwan ihany koa. Ny talen'ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fidiran'ny Israel Yossi Fattal dia nilaza tamin'ny mpikambana ao amin'ny fikambanana fa ny vondrona avy any Korea Selatan, Japon ary Taiwan dia mikasa ny hanao fitsidihana any Israel dia tokony hampandrenesina avy hatrany fa nofoanana ireo fitsidihana ireo.
Ny minisiteran'ny fahasalamana israeliana dia manandrana mamantatra raha toa ny COVID-19 nitazona an'i Israel noho ny fitsidihan'ny mpizahatany koreana izay voamarina fa niverina tany Korea izy ireo. Namoaka ny zotram-pizoran'ny mpizahatany Koreana ny minisitera miaraka amin'ny torolàlana ho an'ireo izay mety nifandray tamin'izy ireo.
I Japan sy Taiwan dia nampiana ho ao amin'ny lisitr'ireo firenena izay noraran'ny minisiteran'ny fahasalamana ny fidiran'ny vahiny any Israel. Ireo mponina israeliana nandany fotoana tany amin'ireny firenena ireny dia takiana hidina mitokana rehefa miverina any Isiraely izy ireo. Ahitana an'i Shina, Hong Kong, Singapore ary Thailandy izao lisitra izao. Ny minisiteran'ny fizahantany dia nampahafantatra ireo maso ivoho fa tokony hanafoana ny fitsangatsanganana any Israel ny mponina ao Japon sy ny firenena hafa.
Te hihaona amin'ny mpanao gazety ao amin'ny ITB i Sri Lanka
Uniglobe Travel mandefa marika nohavaozina